DAAWO: Faarax Macalin oo ka hadlay Safarkii uu ku tagay Muqdisho, Si kululna u weerara Axmed Madoobe oo ku…. – PuntSom – kalasoco wararka
DAAWO: Faarax Macalin oo ka hadlay Safarkii uu ku tagay Muqdisho, Si kululna u weerara Axmed Madoobe oo ku….
in Wararka, Wararka Somalida May 9, 2018	64 Views
Siyaasiga Faarax Macalin oo Wareysi siiyey Tv-ga RTN ee Magaalada Nairobi ayaa ugu horayn wax ka warbixiyey Safarkii uu ku tagay magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya iyo Wuxuu kusoo Arkay.
Dhinaca kale wuxuu ka hadlay arimaha Maamulka Jubbaland Wuxuuna sheegay in Axmed Madoobe uu ku Kooban yahay 5-kiilo Mitir oo ku xeeran Kismaayo, Sidoo kalana aanu wax dan ah u haynin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland, Wuxuuna xusay inay Isaga iyo Al-shabaab dhuxusha la dhoofiyo Lacago ka sameeyaan, Siduu hadalka u dhigay.
Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya ayuu ku sifeeyay inay yihiin Burcad kasoo horjeeda Dawladnimada soomaaliya, Wuxuuna tusaalle usoo qaatay Arimaha Khaliijka iyo Sida ay doonayaan inay u wareejiyaan dekeddaha dalka.